အာရှ | RayHaber | raillynews
အာဖဂန်နစ္စတန် | အာမေးနီးယား | အဇာဘိုင်ဂျန် | ဘာရိန်း | ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု | ဘူတန် | တရုတ်နိုင်ငံ | မြောက်ပိုင်းဆိုက်ပရပ်စ်၏တူရကီသမ္မတနိုင်ငံ | ဂျော်ဂျီယာ | အိန္ဒိယ | အင်ဒိုနီးရှား | အီရန် | အီရတ် | ဣသရလေ | ဂျပန် | ကမ္ဘောဒီးယား | ကာဇက်စတန် | မြောက်ကိုရီးယား | တောင်ကိုရီးယား | catarrh | ကူဝိတ် | Kirghizistan | လာအိုနိုင်ငံ | လေဗနုန်တော | မလေးရှား | မွန်ဂိုလီးယား | ျမန္မာႏုိင္ငံ | Nakhichevan | နီပေါ | အိုမန်| ယော်ဒန်မြစ် | ပါကစ္စတန် | ရုရှားနိုင်ငံ | ဖိလစ်ပိုင် | ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ | စင္ကာပူႏုိင္ငံ | သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ | ဆီးရီးယား | ထိုင်ဝမ် | ထိုင်းနိုင်ငံ | Tajikistan | Tatarstan | Türkiye | တာ့ခ်မင်နစ္စတန် | ဥဇဘက် | ဗီယက်နမ် | ယီမင်
တရုတ်နှင့်တာ့ခ်မင်နစ္စတန်အကြားကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်တည်ဆောက်ထားသောရထားလမ်းလမ်းကြောင်းအသစ်တွင်တရုတ်နိုင်ငံရှိဂျင်းနန်ဘူတာမှထွက်ခွာသည့်ရထားသည်ကာဇက်စတန်နယ်စပ်ဒေသများဖြစ်သော Horgos၊ Altınkolနှင့်Bolaşakမှတဆင့်တာမင်နစ္စတန်၏Gıpcakဘူတာသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ [ပို ... ]
၂၀၂၀၊ မေလ ၂၁ ရက်နေ့တွင်တူရကီမီးရထားမီးရထားအေဂျင်စီများ၊ ဥဇဘက်ကစ္စတန်သမ္မတနိုင်ငံနှင့်အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံတို့အကြားတူရကီမီးရထားအေဂျင်စီအဆောက်အအုံ၌ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ဥဇဘက်ကစ္စတန်မီးရထားအာဏာပိုင်နှင့်အီရန် RAI“ အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံရထားလမ်း” [ပို ... ]
တိုကာဒို Shinkansen မီးရထား
တိုကျိုနှင့်အိုဆာကာကြားရှိမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းပြီးစီးပြီးနောက်တွင်ခရီးသွားချိန်သည်ထက်ဝက်ခန့်ရထားဖြင့်ခရီးသွားရမည့်ခေတ်သစ်ကိုစတင်ခဲ့သည်။ Shinkansen သည် ၁၉၆၄ ခုနှစ်တိုကျိုမြို့ရှိနွေရာသီအိုလံပစ်မတိုင်မီတွင်ဖွင့်သည် (ဂျပန်ဘာသာတွင်“ လိုင်းအသစ်” ကိုဆိုလိုသည်) [ပို ... ]
ကုန်သွယ်ရေး ၀ န်ကြီး Ruhsar Pekcan မှပြောကြားရာတွင်တူရကီသည်နို့နှင့်နို့ထွက်ပစ္စည်းများတင်ပို့မှုအတွက်အတားအဆီးများကိုဖယ်ရှားခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ ၀ န်ကြီး Pekcan ကသူ၏တွစ်တာတွင်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်စိုက်ပျိုးရေးနှင့်သစ်တော ၀ န်ကြီးဌာနတွင်တင်ခဲ့သည် [ပို ... ]
အန္တရာယ်ရှိသည့်ကီလိုမီတာ ၁၀၀၀၀ ကီလိုမီတာကိုဖြတ်သန်းသွားသော Trans-Siberian မီးရထားသည် ၁၉၁၆ ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးခဲ့ပြီး၎င်းသည်တည်ဆောက်ခဲ့သမျှတွင်အရှည်ဆုံးနှင့်ဈေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ Trans-Siberian မီးရထားသည်မော်စကိုမှ Vladivostok သို့လအနည်းငယ်ကြာသည့်လမ်းကိုရှစ်ရက်အထိလျှော့ချနိုင်သည်။ [ပို ... ]
ဂျပန်လေကြောင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များသည်မေလ ၁၈ ရက်တိုကျိုရှိကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွင်ပြုလုပ်သောအခမ်းအနားတွင်ဂျပန်၏ပထမဆုံးအာကာသစစ်ဆင်ရေးယာဉ်များကိုတရားဝင်စတင်ခဲ့သည်။ ဂျပန်လေကြောင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Janes မှတိုကျိုအနောက်ဘက်ရှိ Fuchu သို့ပြောကြားခဲ့သည် [ပို ... ]
တရုတ် - Covid-19 စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအတွက်အစောပိုင်း
Covid-19 စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုစတင်ရန်စောလွန်းကြောင်းတရုတ်ကကြေငြာထားပြီးဖြစ်သည် တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန Sözcüကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိလူပေါင်း ၃၀၀,၀၀၀ ကျော်သေဆုံးခဲ့သော Corona ဗိုင်းရပ်စ်၏မူလအစနှင့်ပြန့်ပွားမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုစတင်ရန်စောသေးကြောင်းSüကပြောကြားခဲ့သည်။ [ပို ... ]
ဗြိတိသျှကိုလိုနီခေတ်တွင်အမှတ်အသားပြုခဲ့သောဆိုက်ပရပ်စ်ရထားလမ်း၏သမိုင်းကြောင်းအတွက်စိတ်ချရသောသတင်းရင်းမြစ်အဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့ကြသော Barry S. Turner နှင့် Michael Radford တို့၏စာအုပ်များကိုလည်းအသုံးပြုခဲ့ကြပြီးထိုအချိန်ကသက်ကြီးရွယ်အိုများထံမှသတင်းအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ [ပို ... ]
Hicaz မီးရထား Tabuk ရထားဘူတာ
Tabuk ဘူတာကို ၁၉၀၆ ခုနှစ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည် (Hijri 1906) ။ ၃၁. ဤဘူတာသည် Hicaz မီးရထားလမ်း၏အရေးကြီးဆုံးနှင့်အကြီးမားဆုံးဘူတာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီဘူတာရုံကိုစိတ်ဝင်စားမှုသည်ဤမြို့၏အရေးပါမှုဖြစ်သည် [ပို ... ]
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်ရထားများပေါ်တွင်လမ်းလျှောက်နေသောအလုပ်သမားများအားရထားဖြင့်တိုက်ခိုက်သည် .. ! အလုပ်သမား ၁၆ ဦး အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့သည်
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများသည် coronavirus ကပ်ရောဂါကြောင့်ညမထွက်ရအမိန့်ကိုမထုတ်ပြန်ရသေးဟုထင်မြင်ခဲ့ကြပြီးအလုပ်ပြီးနောက်ရထားလမ်းများပေါ်တွင်လမ်းလျှောက်ခြင်းဖြင့်သူတို့၏နေအိမ်များသို့ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်ညမထွက်ရအမိန့်ကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည် [ပို ... ]
၁၉၀၉ ခုနှစ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သော Muhit ဘူတာ (Hijri 1909) သည် Hafire ဘူတာမှ ၁၉ ကီလိုမီတာအကွာတွင်ရှိသည်။ ဘူတာရုံ၏အဓိကအဆောက်အအုံအပြင်၊ ကောင်းမွန်သောအခြေအနေနှင့်ဘားတန်းများဖြင့်ဝိုင်းရံထားသောတန်းလျားတစ်ခုလည်းရှိသည်။ ပတ်ပတ်လည်လည်း [ပို ... ]
Hicaz မီးရထား Mashhad ရထားဘူတာ
ဒီဘူတာသည် ၁၉၀၉ ခုနှစ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သော (Hijri 1909) ယခင်ဘူတာမှ ၁၃ ကီလိုမီတာအကွာတွင်ရှိသည်။ ဤနေရာသည်ဘူတာရုံတည်ဆောက်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ ယခင်ဘူတာများနှင့်ဆင်တူသည့်ဘူတာရုံသည်နှစ်ထပ်တိုက်အဓိကဖြစ်သည် [ပို ... ]
၎င်းသည် Hicaz မီးရထားလမ်း၏နောက်ဆုံးနှင့်အဓိကဘူတာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီဘူတာရုံသည်ယခင်ဘူတာမှ ၁၅ ကီလိုမီတာအကွာတွင်ရှိသည်။ အနက်ရောင်ကျောက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဘူတာသည်အဆောက်အ ဦး များစွာကိုဖုံးလွှမ်းထားသည်။ အရှည် 15 မီတာနှင့်အကျယ် 600 မီတာ [ပို ... ]
တူရကီကုမ္ပဏီ Yapi Madinah အမြန်ရထားဘူတာသည်ဆော်ဒီအာရေဗျတွင်ပြီးဆုံးသွားသောမက္ကာ၊ ဂျီဒဒါ၊ ဘုရင်အဗ္ဗဒူလာစီးတီးနှင့်မက်ဒီနာများကိုဆက်သွယ်ထားသောကီလိုမီတာ ၄၅၀ ရှည်သော Haremeyn မြန်နှုန်းမြင့်ရထားစီမံကိန်း၏နယ်မြေအတွင်းဖြစ်သည်။ [ပို ... ]
ရုရှားကြည်းတပ်တွင် Coronavirus နှိုးစက်
ရုရှားစစ်တပ်၏ထုတ်ပြန်ချက်အရ COVID-19 စမ်းသပ်မှုအတွက်အပြုသဘောဆောင်သောစစ်သားအရေအတွက်မှာယနေ့အထိ ၉၀၁ အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ ကြေငြာချက်တွင် COVID-901 စစ်ဆေးမှုကိုအပြုသဘောရှိခဲ့သောစစ်သား ၃၂၄ ဦး အနက် ၁၇၆ ဦး သည်ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်တွင်ဆေးရုံတင်ထားရသည်။ [ပို ... ]
၂၀၂၁ မှ စတင်၍ တူရကီသေနတ်များထုတ်လုပ်ရန်ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား
ဆော်ဒီအာရေဗျ (GAMI) စစ်ဘက်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု၏တွစ်တာအကောင့်မှထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်တွင်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုများကိုစတင်ခဲ့သည်ဟုဖော်ပြထားသည်။ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွင်စီမံကိန်းပြက္ခဒိန်တွင် [ပို ... ]
Saab သည်ပထမဆုံး GlobalEye AEW & C လေယာဉ်ကို United Arab Emirates သို့ပို့ဆောင်သည်
Saab သည် ၂၀၂၀၊ 29ပြီ ၂၉ ရက်တွင်သူသည်ပထမဆုံး GlobalEye AEW & C လေယာဉ်များကို United Arab Emirates သို့ပေးပို့ခဲ့ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုသည် GlobalEye AEW & C အမှာစာ (၃) ခုကိုအပြီးသတ်လိုက်သည်။ ယူအေအီး [ပို ... ]
တရုတ်နိုင်ငံ၏ပဉ္စမမျိုးဆက် Maglev သည်အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသောစမ်းသပ်မှုများကိုလေ့ကျင့်သည်
တရုတ်ကုမ္ပဏီ CRRC မှထုတ်လုပ်သောပဉ္စမမျိုးဆက် maglev ရထားသည်၎င်း၏နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုများကိုအောင်မြင်စွာပြီးစီးနိုင်ခဲ့သည်။ Tangshan မြို့တွင်ပြုလုပ်သောစမ်းသပ်မှုများအရကုမ္ပဏီ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်တစ်နာရီလျှင် ၁၆၀ ကီလိုမီတာနှုန်းရှိသည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ အခြား maglev စနစ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ [ပို ... ]
Exportပြီ ၁၈ ရက်တွင်ကာ့စ်မှထွက်ခွာသောiantရာမပို့ဆောင်ရေးရထား
arsပြီ ၁၈ ရက်တွင်ကာ့မှထွက်ခွာသောရာမပို့ကုန်ရထားကိုကက်စပီယန်သို့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး၊ တူရကီ, အဇာဘိုင်ဂျန်, ကာဇက်စတန်, တာ့ခ်မင်နစ္စတန်နှင့် 18 မီတာဟာ 940 ဘာကူ alat ဥဇဘက်တင်ပို့ကွန်တိန်နာထုတ်ကုန်များ၏ရထားထဲမှာထည့်သွင်းကနေအစ်ကိုနိုင်ငံများ [ပို ... ]
ဝယ်ရန်ပြင်ဆင်နေတူရကီ KNT-76 SRifle ထံမှအဇာဘိုင်ဂျန်
KNT-76 ကတီထွင်တူရကီစက်မှုနှင့်ဓာတုစက်မှုကော်ပိုရေးရှင်း (MKEK) မှကာကွယ်ရေးအဇာဘိုင်ဂျန်န်ကြီးဌာန, SRifle ဝယ်ယူရန်ပြင်ဆင်နေသည်။ KNT-76 ၇.၆၂ x ၅၁ မီလီမီတာ Manga အမျိုးအစားကိုစက်ပစ္စည်းဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းကော်ပိုရေးရှင်း၏အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းများဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည် [ပို ... ]
၉၅ မြန်မာ (မြန်မာ)
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ၀ န်ထမ်းများမြန်မာနိုင်ငံတွင်တိုက်ခိုက်ခံရ
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှဝန်ထမ်းများကမြန်မာနိုင်ငံတွင်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုတွင်ယာဉ်မောင်းတစ် ဦး သေဆုံးခဲ့သည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ Corona လူနာများ၏ယာဉ်မောင်းသူနှင့်ယာဉ်စစ်ဆေးမှုခံထားရသည့်ယာဉ်မောင်းသူအားတိုက်ခိုက်မှုတွင်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနောက်သူသည်ဆေးရုံတွင်နေခဲ့ရသည်။ [ပို ... ]
အမေရိကန် - ရုရှားနိုင်ငံသည်ဂြိုဟ်တုဆန့်ကျင်ရေးဒုံးကျည်စမ်းသပ်
ယူအက်စ်အာကာသစစ်ဌာနချုပ် (USSPACECOM) သည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်၊ Aprilပြီလ ၁၅ ရက်နေ့တွင်ရုရှားနိုင်ငံသည်ဂြိုဟ်တုဆန့်ကျင်ရေးဒုံးကျည် (DA-ASAT) ဒုံးကျည်ကိုစမ်းသပ်အသုံးပြုပြီးဖြစ်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ US Space Force Commander General John W. Raymond [ပို ... ]
2018 ခုနှစ်တွင်မော်စကို Boulevard နှင့်ဇန်နဝါရီလ 20 လမ်းဆုံတွင်အဇာဘိုင်ဂျန်ပြည်နယ်အဝေးပြေးအေဂျင်စီကဘတ်စ်ကားတွင်ယာဉ်နှင့်လူကူးအသွားအလာအလွန်အလုပ်များနေသောလူကူးတံတားကိုတည်ဆောက်ရန်စီစဉ်ထားသည်။ [ပို ... ]
ဂျာမနီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည်တရုတ်မှဂျာမနီသို့အကာအကွယ်အ ၀ တ်အထည်များ၊ ဂျာမန်စာနယ်ဇင်းအေဂျင်စီ၏Aprilပြီ ၁၁ ရက်နှင့်ဘာလင်အခြေစိုက်သတင်းများအရ [ပို ... ]